Video Game ဆိုတာ အားကစားနည်း တစ်ခုပါလား? – Gaming Noodle
ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှာ Computer နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Console ဂိမ်းစက်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Mobile ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် Video Game ဆော့နေခြင်းကို အကျိုးမရှိပဲ အချိန်ဖြုန်းသလို ထင်မြင်နေသူ အများအပြားရှိပါတယ်။ အဲလိုမျိုးဟာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတက်သလို သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထိုကဲ့သို့ အမြင်မျိုးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Video Game ဆိုတာ ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကျ အားကစားနည်းမျိုးပဲဖြစ်ပြီး သူကတော့ ကာယထက်စာရင် ဉာဏကို အသုံးပြုပြီး ဆော့ရတဲ့ ကစားနည်းမျိုးပါလို့ ရှင်းပြပါရစေ။
Video Game ကို တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အသင်းလိုက်ဖြစ်စေ၊ ပြိုင်ပွဲအသွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခြင်းကို Electronic Sports (Esports) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Video Game ဆိုတာကို သမာရိုးကျ အားကစားတွေလိုပဲ အားလပ်ချိန်မှာ ဆော့ကစားရင် ဝါသနာ သို့မဟုတ် အပန်းဖြေခြင်း သဘောမျိုးနဲ့ ဆော့ကစားနိုင်ပြီး သေချာလေ့လာလိုက်စားပြီး ထူးချွန်မယ်ဆိုရင် Professional Esports Player တစ်ယောက်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်ပါတယ်။
Esports ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေကတော့ Computer နဲ့ဆော့ရတဲ့ Dota, Counter Strike, PUBG တို့၊ Mobile ဖုန်းနဲ့ဆော့ရတဲ့ Mobile Legends, PUBG Mobile, Clash Royale တို့အပြင် PS4, Xbox တို့လို Console Platform မှာဆော့ရတဲ့ Pro Evolution Soccer, FIFA, Call of Duty, Tekken တို့အပြင် အခြားအမျိုးအစားပေါင်းများစွာလည်း ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း လူအများလက်ခံထားကျတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မှုကို အသားပေးတဲ့ ဘောလုံး၊ ဘက်စကက်ဘော၊ လက်ဝှေ့၊ တင်းနစ်၊ ကြက်တောင် တို့လို့ အားကစားနည်းတွေနဲ့ Esports ဟာ အပေါ်ယံမှာတော့ ကွဲပြားသလို ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ တူညီမှုတွေ အများအပြားရှိနေပါတယ်။
ဘာတွေတူညီနေလည်းဆိုတာ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရမှာပါ။
>> စနစ်ကျသော နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ <<
Esports ကစားသမားတွေဟာအများမြင်တွေ့နေကျ Video ဂိမ်းကို အပျော်ဆော့နေသူတွေလို ညကိုသန်းခေါင်ကျော်မှအိပ်၊ မနက်ကို နေဖင်ထိုးမှထကြရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ အိမ်တစ်အိမ်/ အခန်းတစ်ခန်းမှာ စခန်းသွင်းသလို စုစုစည်းစည်း နေကြရပြီး ပုံမှန်အားကစားသမား တစ်ယောက်လို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အိပ်ချိန်စားချိန်အရ နေထိုင်ရပါတယ်။ အိပ်ချိန်စားချိန် မမှန်တဲ့အခါ စိတ်မရွှင်မလန်းဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Game အတွင်းက ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
Professional အသင်းအများစုမှာ ကစားသမားတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ချက်ပြုတ်ပေးဖို့ စားဖိုမှုးတစ်ဦး ရှိနေတက်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Professional Esports ကစားသမား အများစုဟာ လူတွေထင်သလို အထိုင်များနေတဲ့အတွက် ပုံမှန်အားကစားသမားတွေလို မဟုတ်ပဲ ပုံပျက်ပန်းပျက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အဝလွန်နေတယ်လို့ထင်နေရင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။
Professional Esports အသင်းတိုင်းလိုလို ကစားသမားတွေရဲ့ နေ့စဉ်အချိန်ဇယားမှာ စားချိန်အိပ်ချိန် လေ့ကျင့်ချိန်အပြင် ကိုယ်ကာယအချိန်ကိုပါ ထည့်သွင်းထားတတ်ကြပြီး Gym ဆော့သည်ဖြစ်စေ၊ ဘောလုံး ဘက်စကက်ဘော ကြက်တောင် စသည့် ကစားနည်းများကိုပါ ကစားစေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
>> လေ့ကျင့်ချိန် <<
Professional Esports Player / အသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ လေ့ကျင့်ချိန်က ပျမ်းမျှတစ်နေ့ကို ၆ နာရီမှ ၈ နာရီ၊ တစ်ပါတ်ကို နာရီ ၅၀ ခန့်အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အချို့သော Semi-Professional အသင်းတွေတောင် တစ်နေ့လေ့ကျင့်ချိန် ၅ နာရီ၊ ၆ နာရီခန့်အထိ ရှိတတ်ကြပါတယ်။
Training အတွက် နိုင်ငံခြားက အသင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Online ကနေပဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရတာ များပါတယ်။ ပုံမှန် Esports အသင်းတစ်သင်းရဲ့ လေ့ချိန်မှုကိုတော့ နေ့လည် ၁ နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကနေ ညနေ ၇,၈,၉ နာရီလောက်မှအထိ ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
Evil Geniuses Training House
>> ပြိုင်ဖက်ကိုလေ့လာမှု <<
Professional ဖြစ်စေ၊ Semi-Professional ဖြစ်စေ Esports အသင်းတစ်သင်းမှာ နည်းပြ (Coach) တစ်ဦး ရှိပါတယ်။ ဒီ Coach ဟာ အသင်းရဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို ချမှတ်တဲ့အပြင် Player တွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်ဖို့ပါ ကူညီပေးရတယ်။ ဒါ့ပြင် ပြိုင်ဖက်ရဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုပါ လေ့လာရပြီး အသာရနိုင်မယ့် ကစားကွက်ကို ခင်းကျင်းပေးရပါတယ်။
ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း လေ့ကျင့်မှုနားထားတဲ့ အချိန်မှာ ပြိုင်ဖက်အသင်းရဲ့ ကစားထားတဲ့ ပွဲတွေကို အတူတူ ကြည့်ရှုလေ့လာသုံးသပ်တာမျိုးတွေ၊ ကမ္ဘာအဆင့်အသင်းတွေရဲ့ ကစားပုံတွေကို လေ့လာ မှတ်သားရတာမျိုးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်ရပါတယ်။
>> ပရိသတ်အားပေးမှု <<
Esports ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားတွေအားလုံး Online ကနေ ယှဉ်ပြိုင်ကစားနိုင်ပြီး ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်း ဂိမ်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ဖြစ်စေ၊ Facebook, Youtube, Twitch အစရှိ Channel များမှဖြစ်စေ၊ TV Channel များမှဖြစ်စေ အချိန်နဲ့တပြေးညီ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုဖို့ ရွေးချယ်စရာများပြားခြင်းက သမားရိုးကျ အားကစားနည်းတွေထက် သာလွန်တဲ့ အချက်ပါပဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့် နိုင်ငံအလိုက် သို့မဟုတ် ဒေသအလိုက် လက်ရည်စစ်ပွဲများကိုသာ Online မှတဆင့် ဆော့ကစားစေပြီး လက်ရည်စစ်ပွဲအောင်မြင်လာသော အသင်းများအားလုံးကို စုပေါင်းပြီး နောက်ဆုံးအဆင့် Final ပြိုင်ပွဲများကို Shopping Mall များ၊ Esports Stadium များ၊ Indoor Stadium များ၊ ဘောလုံးကွင်းများ၊ Hotel / Resort များ စသည့်နေရာများတွင် ကျင်းပလေ့ရှိတယ်။
ဥပမာ 2014 ခုနှစ်တုန်းက ဂိမ်းအမျိုးပေါင်းများစွာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Myanmar Gaming Festival ပြိုင်ပွဲကို သုဝဏ္ဏ မိုးလုံလေလုံအားကစားခန်းမမှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သလို 2018 ခုနှစ်မှာလည်း မန္တလေးတက္ကသိုလ်များ Dota2 ပြိုင်ပွဲကို မန္တလေး အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံတွင် အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Syracuse University မှစစ်တမ်းများအရ ယခု 2019 ခုနှစ်တွင် တကမ္ဘာလုံးရှိ Esports ပရိသတ်ဦးရေ သန်း ၄၅၀ ခန့် ရှိလာနိုင်ပြီး 2020 ခုနှစ်မှာ ပရိသတ်ဦးရေ သန်း ၅၀၀ ခန့်အထိ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။
>> ဆုကြေး <<
Esports ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ဆုကြေးတွေက သမားရိုးကျ အားကစားပြိုင်ပွဲအများစုရဲ့ ဆုကြေးတွေထက် များတယ်ဆိုတာကို သင်ယုံကြည်လိုက်ပါ။ လက်ရှိဆုကြေးအများဆုံးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကတော့ 2018 ကနေဒါနိုင်ငံမှာကျင်းခဲ့တဲ့ The International 2018 Dota2 ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ဆုကြေးငွေဒေါ်လာ 25.5 သန်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမရရှိခဲ့တဲ့အသင်းဟာ ဆုကြေး ဒေါ်လာ 11.2 သန်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆုကြေးဟာ Tennis, Golf, American Football, Rugby, Ice Hockey စတဲ့ ကစားနည်းတွေရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးပြိုင်ပွဲမျိုးတွေမှာ ရတဲ့ဆုကြေးထက် များပါတယ်။
Esports ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ဆုကြေးငွေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် လျှင်မြန်စွာတိုးတက်နေတဲ့အတွက် မကြာမီကာလတစ်ခုမှာ World Cup, Champion League, World Series (Baseball) စတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပြိုင်ပွဲတွေကို ကျော်တက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အထူးအဆန်းဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နေ့စဉ်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ Esports ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကတော့ အစဉ်အမြဲရှိလို့နေပြီး လစဉ်တိုင်းမှာ ဆုကြေးငွေအမေရိကန် ဒေါ်လာသိန်းဂဏန်း ကနေ သန်းဂဏန်းအထိ ပေးအပ်မယ့်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေ တစ်ပွဲမဟုတ်တစ်ပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိနေလို့ပါပဲ။
>> စီးပွားရေး <<
သမာရိုးကျ အားကစားတွေလိုပဲ Esports အသင်းတွေဟာလည်း ဆုကြေးငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ ရပ်တည်တာမဟုတ်ပဲ သူတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ Brand တွေ၊ Sponsor တွေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေရှိနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒီလို Esports အသင်းများကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေထဲမှာ Esports နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ အားကစားသမားများ အဆိုတော်များ ဆယ်လီများ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
Esports ကစားသမားများရဲ့ အသင်းအင်္ကျီတွေမှာလည်း အခြားကစားနည်းတွေလို ကြော်ညာတွေ ပြည့်နက်နေတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ Sponsor အများစုက ဂိမ်းနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Gaming Gear နဲ့ Hardware ကုမ္ပဏီတွေ၊ ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေ၊ Internet ကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အစားအသောက် Brand တွေ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ ကားကုမ္ပဏီတွေပါ Esports အသင်းတွေ ပြိုင်ပွဲတွေကို စပွန်ဆာ ပေးလာကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။
Credit – Medium:100+ Brands Have Invested In eSports: Q3 2017 Brand Tracker
အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင် Esports ဟာ သမားရိုးကျအားကစားနည်းတွေနဲ့ တူညီမှုတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း အိုလံပစ်ကော်မတီ International Olympic Committee (IOC) ကနေ အားကစားနည်းတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း မကြာသေးမီက ကျင်းပခဲ့တဲ့ 2018 အင်ဒိုနီးရှား ၁၈ ကြိမ်မြောက် အာရှအားကစားပွဲတော် (2018 ASIAN GAMES) မှာအစမ်းပြကစားနည်းအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သလို၊ လာမယ့် 2019 November ဖိလစ်ပိုင်မှာ ကျင်းပမယ့် အကြိမ်၃၀မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲတော် (Philippines 2019 SEA GAMES) မှာလည်း Esports ကို ဆုတံဆိပ်ပေးအပ်တဲ့ အားကစားနည်းတစ်ခု အနေနဲ့ ပထမဆုံးထည့်သွင်းလာခဲ့ပါပြီ။
စစ်တုရင် (Chess) လို ဉာဏ်ပညာအသားပေး ကစားနည်းမျိုးကို (အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုမှပါထားခြင်း မရှိသေးပေမယ့်လည်း) အိုလံပစ်ကစားနည်း တစ်ခုအဖြစ် International Olympic Committee က အသိအမှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုမှာ Electronic Sports (Esports) ကို Olympic အားကစားတစ်ခုအနေနဲ့ပါ အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် 2024 အိုလံပစ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ အမေရိကန်မှာကျင်းပမယ့် 2028 အိုလံပစ်မှာဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်တို့အားပေးတဲ့ Esports Player တွေ သို့မဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် ကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ Video ဂိမ်းဆိုတာကြီးကို ကမ္ဘာအလယ်မှာ ဝင့်ကြွားစွာ တရားဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားခွင့်ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Video Game ဆိုတာ အားကစားနညျး တဈခုပါလား?
ကြှနျတျောတို့ လကျရှိနထေိုငျနတေဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးတဈခုမှာ Computer နဲ့ပဲဖွဈဖွဈ Console ဂိမျးစကျနဲ့ ဖွဈဖွဈ Mobile ဖုနျးနဲ့ဖွဈဖွဈ Video Game ဆော့နခွေငျးကို အကြိုးမရှိပဲ အခြိနျဖွုနျးသလို ထငျမွငျနသေူ အမြားအပွားရှိပါတယျ။ အဲလိုမြိုးဟာ သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှာရှိနတေကျသလို သငျကိုယျတိုငျကလညျး ထိုကဲ့သို့ အမွငျမြိုးရှိနနေိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး Video Game ဆိုတာ ပုံမှနျမွငျတှနေ့ကြေ အားကစားနညျးမြိုးပဲဖွဈပွီး သူကတော့ ကာယထကျစာရငျ ဉာဏကို အသုံးပွုပွီး ဆော့ရတဲ့ ကစားနညျးမြိုးပါလို့ ရှငျးပွပါရစေ။
Video Game ကို တဈဦးခငျြးဖွဈစေ၊ အသငျးလိုကျဖွဈစေ၊ ပွိုငျပှဲအသှငျ ယှဉျပွိုငျကစားခွငျးကို Electronic Sports (Esports) လို့ချေါပါတယျ။ Video Game ဆိုတာကို သမာရိုးကြ အားကစားတှလေိုပဲ အားလပျခြိနျမှာ ဆော့ကစားရငျ ဝါသနာ သို့မဟုတျ အပနျးဖွခွေငျး သဘောမြိုးနဲ့ ဆော့ကစားနိုငျပွီး သခြောလလေ့ာလိုကျစားပွီး ထူးခြှနျမယျဆိုရငျ Professional Esports Player တဈယောကျအဖွဈအသကျမှေးဝမျးကွောငျးပွုနိုငျပါတယျ။
Esports ဂိမျးအမြိုးအစားတှကေတော့ Computer နဲ့ဆော့ရတဲ့ Dota, Counter Strike, PUBG တို့၊ Mobile ဖုနျးနဲ့ဆော့ရတဲ့ Mobile Legends, PUBG Mobile, Clash Royale တို့အပွငျ PS4, Xbox တို့လို Console Platform မှာဆော့ရတဲ့ Pro Evolution Soccer, FIFA, Call of Duty, Tekken တို့အပွငျ အခွားအမြိုးအစားပေါငျးမြားစှာလညျး ကနျြရှိနပေါသေးတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး လူအမြားလကျခံထားကတြဲ့ ကိုယျခန်ဓာကွံ့ခိုငျမှုကို အသားပေးတဲ့ ဘောလုံး၊ ဘကျစကကျဘော၊ လကျဝှေ့၊ တငျးနဈ၊ ကွကျတောငျ တို့လို့ အားကစားနညျးတှနေဲ့ Esports ဟာ အပျေါယံမှာတော့ ကှဲပွားသလို ထငျရပမေယျ့ တကယျတမျးမှာတော့ တူညီမှုတှေ အမြားအပွားရှိနပေါတယျ။
ဘာတှတေူညီနလေညျးဆိုတာ အောကျပါအတိုငျး တှရှေိ့ရမှာပါ။
>> စနဈကသြော နထေိုငျစားသောကျမှုပုံစံ <<
Esports ကစားသမားတှဟောအမြားမွငျတှနေ့ကြေ Video ဂိမျးကို အပြျောဆော့နသေူတှလေို ညကိုသနျးခေါငျကြျောမှအိပျ၊ မနကျကို နဖေငျထိုးမှထကွရတာ မဟုတျပါဘူး။ သူတို့ဟာ အိမျတဈအိမျ/ အခနျးတဈခနျးမှာ စခနျးသှငျးသလို စုစုစညျးစညျး နကွေရပွီး ပုံမှနျအားကစားသမား တဈယောကျလို ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အိပျခြိနျစားခြိနျအရ နထေိုငျရပါတယျ။ အိပျခြိနျစားခြိနျ မမှနျတဲ့အခါ စိတျမရှငျမလနျးဖွဈစနေိုငျပွီး ကိုယျ့ရဲ့ Game အတှငျးက ဆုံးဖွတျခကျြကိုပါ ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
Professional အသငျးအမြားစုမှာ ကစားသမားတှကေို ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ အစားအသောကျတှေ ခကျြပွုတျပေးဖို့ စားဖိုမှုးတဈဦး ရှိနတေကျပါတယျ။ ထို့အပွငျ Professional Esports ကစားသမား အမြားစုဟာ လူတှထေငျသလို အထိုငျမြားနတေဲ့အတှကျ ပုံမှနျအားကစားသမားတှလေို မဟုတျပဲ ပုံပကျြပနျးပကျြခန်ဓာကိုယျနဲ့ အဝလှနျနတေယျလို့ထငျနရေငျ မှားသှားပါလိမျ့မယျ။
Professional Esports အသငျးတိုငျးလိုလို ကစားသမားတှရေဲ့ နစေ့ဉျအခြိနျဇယားမှာ စားခြိနျအိပျခြိနျ လကေ့ငျြ့ခြိနျအပွငျ ကိုယျကာယအခြိနျကိုပါ ထညျ့သှငျးထားတတျကွပွီး Gym ဆော့သညျဖွဈစေ၊ ဘောလုံး ဘကျစကကျဘော ကွကျတောငျ စသညျ့ ကစားနညျးမြားကိုပါ ကစားစတောကို တှရေ့မှာပါ။
>> လကေ့ငျြ့ခြိနျ <<
Professional Esports Player / အသငျးတဈသငျးအနနေဲ့ လကေ့ငျြ့ခြိနျက ပမျြးမြှတဈနကေို့ ၆ နာရီမှ ၈ နာရီ၊ တဈပါတျကို နာရီ ၅၀ ခနျ့အထိ ရှိတတျပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံက အခြို့သော Semi-Professional အသငျးတှတေောငျ တဈနလေ့ကေ့ငျြ့ခြိနျ ၅ နာရီ၊ ၆ နာရီခနျ့အထိ ရှိတတျကွပါတယျ။
Training အတှကျ နိုငျငံခွားက အသငျးတှနေဲ့ခြိတျဆကျပွီး Online ကနပေဲ ယှဉျပွိုငျကစားရတာ မြားပါတယျ။ ပုံမှနျ Esports အသငျးတဈသငျးရဲ့ လခြေိ့နျမှုကိုတော့ နလေ့ညျ ၁ နာရီဝနျးကငျြခနျ့ကနေ ညနေ ၇,၈,၉ နာရီလောကျမှအထိ ပွုလုပျလေ့ ရှိကွပါတယျ။
>> ပွိုငျဖကျကိုလလေ့ာမှု <<
Professional ဖွဈစေ၊ Semi-Professional ဖွဈစေ Esports အသငျးတဈသငျးမှာ နညျးပွ (Coach) တဈဦး ရှိပါတယျ။ ဒီ Coach ဟာ အသငျးရဲ့ နညျးစနဈနဲ့ နညျးဗြူဟာတှကေို ခမြှတျတဲ့အပွငျ Player တှရေဲ့ အရညျအခငျြးတှေ တိုးတကျဖို့ပါ ကူညီပေးရတယျ။ ဒါ့ပွငျ ပွိုငျဖကျရဲ့နညျးဗြူဟာတှကေိုပါ လလေ့ာရပွီး အသာရနိုငျမယျ့ ကစားကှကျကို ခငျးကငျြးပေးရပါတယျ။
ကစားသမားတှကေိုယျတိုငျကလညျး လကေ့ငျြ့မှုနားထားတဲ့ အခြိနျမှာ ပွိုငျဖကျအသငျးရဲ့ ကစားထားတဲ့ ပှဲတှကေို အတူတူ ကွညျ့ရှုလလေ့ာသုံးသပျတာမြိုးတှေ၊ ကမ်ဘာအဆငျ့အသငျးတှရေဲ့ ကစားပုံတှကေို လလေ့ာ မှတျသားရတာမြိုးတှကေိုလညျး ပွုလုပျရပါတယျ။
>> ပရိသတျအားပေးမှု <<
Esports ပွိုငျပှဲအမြိုးအစားတှအေားလုံး Online ကနေ ယှဉျပွိုငျကစားနိုငျပွီး ကွညျ့ရှုသူ ပရိသတျမြားအနနေဲ့လညျး ဂိမျးအတှငျးသို့ ဝငျရောကျ၍ဖွဈစေ၊ Facebook, Youtube, Twitch အစရှိ Channel မြားမှဖွဈစေ၊ TV Channel မြားမှဖွဈစေ အခြိနျနဲ့တပွေးညီ တိုကျရိုကျကွညျ့ရှုဖို့ ရှေးခယျြစရာမြားပွားခွငျးက သမားရိုးကြ အားကစားနညျးတှထေကျ သာလှနျတဲ့ အခကျြပါပဲ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့ နိုငျငံအလိုကျ သို့မဟုတျ ဒသေအလိုကျ လကျရညျစဈပှဲမြားကိုသာ Online မှတဆငျ့ ဆော့ကစားစပွေီး လကျရညျစဈပှဲအောငျမွငျလာသော အသငျးမြားအားလုံးကို စုပေါငျးပွီး နောကျဆုံးအဆငျ့ Final ပွိုငျပှဲမြားကို Shopping Mall မြား၊ Esports Stadium မြား၊ Indoor Stadium မြား၊ ဘောလုံးကှငျးမြား၊ Hotel / Resort မြား စသညျ့နရောမြားတှငျ ကငျြးပလရှေိ့တယျ။
ဥပမာ 2014 ခုနှဈတုနျးက ဂိမျးအမြိုးပေါငျးမြားစှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ Myanmar Gaming Festival ပွိုငျပှဲကို သုဝဏ်ဏ မိုးလုံလလေုံအားကစားခနျးမမှာ အောငျမွငျစှာ ကငျြးပနိုငျခဲ့သလို 2018 ခုနှဈမှာလညျး မန်တလေးတက်ကသိုလျမြား Dota2 ပွိုငျပှဲကို မန်တလေး အမြိုးသား ကဇာတျရုံတှငျ အောငျမွငျစှာပွုလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံရှိ Syracuse University မှစဈတမျးမြားအရ ယခု 2019 ခုနှဈတှငျ တကမ်ဘာလုံးရှိ Esports ပရိသတျဦးရေ သနျး ၄၅၀ ခနျ့ ရှိလာနိုငျပွီး 2020 ခုနှဈမှာ ပရိသတျဦးရေ သနျး ၅၀၀ ခနျ့အထိ ရှိလာနိုငျတယျလို့ ဖျောပွထားတယျ။
>> ဆုကွေး <<
Esports ပွိုငျပှဲတှရေဲ့ ဆုကွေးတှကေ သမားရိုးကြ အားကစားပွိုငျပှဲအမြားစုရဲ့ ဆုကွေးတှထေကျ မြားတယျဆိုတာကို သငျယုံကွညျလိုကျပါ။ လကျရှိဆုကွေးအမြားဆုံးဂိမျးပွိုငျပှဲကတော့ 2018 ကနဒေါနိုငျငံမှာကငျြးခဲ့တဲ့ The International 2018 Dota2 ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး ဆုကွေးငှဒေျေါလာ 25.5 သနျး ပေးအပျခဲ့ပါတယျ။ ပထမရရှိခဲ့တဲ့အသငျးဟာ ဆုကွေး ဒျေါလာ 11.2 သနျး ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒီဆုကွေးဟာ Tennis, Golf, American Football, Rugby, Ice Hockey စတဲ့ ကစားနညျးတှရေဲ့ အကွီးကယျြဆုံးပွိုငျပှဲမြိုးတှမှော ရတဲ့ဆုကွေးထကျ မြားပါတယျ။
Esports ပွိုငျပှဲတှရေဲ့ ဆုကွေးငှဟော တဈနှဈထကျတဈနှဈ လြှငျမွနျစှာတိုးတကျနတေဲ့အတှကျ မကွာမီကာလတဈခုမှာ World Cup, Champion League, World Series (Baseball) စတဲ့ ကမ်ဘာကြျောပွိုငျပှဲတှကေို ကြျောတကျသှားနိုငျမယျဆိုရငျ ဒါဟာ အထူးအဆနျးဖွဈတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နစေ့ဉျကမ်ဘာအရပျရပျက အခြိနျတိုငျး နရောတိုငျးမှာ ကငျြးပနတေဲ့ Esports ပွိုငျပှဲတဈပှဲကတော့ အစဉျအမွဲရှိလို့နပွေီး လစဉျတိုငျးမှာ ဆုကွေးငှအေမရေိကနျ ဒျေါလာသိနျးဂဏနျး ကနေ သနျးဂဏနျးအထိ ပေးအပျမယျ့ပွိုငျပှဲကွီးတှေ တဈပှဲမဟုတျတဈပှဲ ကငျြးပလရှေိ့နလေို့ပါပဲ။
>> စီးပှားရေး <<
သမာရိုးကြ အားကစားတှလေိုပဲ Esports အသငျးတှဟောလညျး ဆုကွေးငှတေဈခုတညျးနဲ့ ရပျတညျတာမဟုတျပဲ သူတို့ကို ထောကျပံ့ပေးနတေဲ့ Brand တှေ၊ Sponsor တှေ ရငျးနှီးမွုပျနှံသူတှရှေိနတောကို တှရေ့မှာပါ။
ဒီလို Esports အသငျးမြားကို ရငျးနှီးမွုပျနှံသူတှထေဲမှာ Esports နဲ့မသကျဆိုငျတဲ့ အားကစားသမားမြား အဆိုတျောမြား ဆယျလီမြား ပါဝငျနတောကို တှရေ့မှာပါ။
Esports ကစားသမားမြားရဲ့ အသငျးအင်ျကြီတှမှောလညျး အခွားကစားနညျးတှလေို ကွျောညာတှေ ပွညျ့နကျနတောကို မွငျနိုငျပါတယျ။ Sponsor အမြားစုက ဂိမျးနဲ့ဆကျစပျပစ်စညျးတှေ ဖွဈတဲ့ Gaming Gear နဲ့ Hardware ကုမ်ပဏီတှေ၊ ဖုနျးကုမ်ပဏီတှေ၊ Internet ကုမ်ပဏီတှေ ဖွဈပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ အစားအသောကျ Brand တှေ၊ လူသုံးကုနျပစ်စညျးတှေ၊ ကားကုမ်ပဏီတှပေါ Esports အသငျးတှေ ပွိုငျပှဲတှကေို စပှနျဆာ ပေးလာကွတာကို တှရေ့မှာပါ။
အနှဈခြုပျအနနေဲ့ဆိုရငျ Esports ဟာ သမားရိုးကအြားကစားနညျးတှနေဲ့ တူညီမှုတှေ ရှိနပေမေယျ့လညျး အိုလံပဈကျောမတီ International Olympic Committee (IOC) ကနေ အားကစားနညျးတဈခုအဖွဈ အသိအမှတျပွုထားခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး မကွာသေးမီက ကငျြးပခဲ့တဲ့ 2018 အငျဒိုနီးရှား ၁၈ ကွိမျမွောကျ အာရှအားကစားပှဲတျော (2018 ASIAN GAMES) မှာအစမျးပွကစားနညျးအဖွဈ ပါဝငျခဲ့သလို၊ လာမယျ့ 2019 November ဖိလဈပိုငျမှာ ကငျြးပမယျ့ အကွိမျ၃၀မွောကျ အရှတေ့ောငျအာရှ အားကစားပှဲတျော (Philippines 2019 SEA GAMES) မှာလညျး Esports ကို ဆုတံဆိပျပေးအပျတဲ့ အားကစားနညျးတဈခု အနနေဲ့ ပထမဆုံးထညျ့သှငျးလာခဲ့ပါပွီ။
စဈတုရငျ (Chess) လို ဉာဏျပညာအသားပေး ကစားနညျးမြိုးကို (အိုလံပဈပွိုငျပှဲ တဈခုမှပါထားခွငျး မရှိသေးပမေယျ့လညျး) အိုလံပဈကစားနညျး တဈခုအဖွဈ International Olympic Committee က အသိအမှတျပွီးသားဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတျတဈခုမှာ Electronic Sports (Esports) ကို Olympic အားကစားတဈခုအနနေဲ့ပါ အသိအမှတျပွုခံရပွီး ပွငျသဈနိုငျငံမှာ ကငျြးပမယျ့ 2024 အိုလံပဈမှာဖွဈဖွဈ၊ အမရေိကနျမှာကငျြးပမယျ့ 2028 အိုလံပဈမှာဖွဈဖွဈ ပါဝငျလာမယျဆိုရငျတော့ သငျ့တို့အားပေးတဲ့ Esports Player တှေ သို့မဟုတျ သငျကိုယျတိုငျတောငျမှ နိုငျငံဂုဏျဆောငျ ကစားသမားတဈယောကျအနနေဲ့ Video ဂိမျးဆိုတာကွီးကို ကမ်ဘာအလယျမှာ ဝငျ့ကွှားစှာ တရားဝငျယှဉျပွိုငျကစားခှငျ့ရတော့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ ခငျဗြာ။
#TraditionalSports #ElectronicSports #SEAGames #Olympic